अपि पावरको गत आर्थिक वर्षको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
कात्तिक २७, काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ ।
९ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि विगत दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभा मंसिर ८ गते संयुक्त रुपमा आव्हान गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को १६ औं र २०७६/ ७७ को १७ औं वार्षिक साधारण सभा मंसिर ८ गते संयुक्त रूपमा बोलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को १६ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि कम्पनीले चैत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म बुक क्लोज गरेको थियो । यस आधारमा फागुन ३० गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र उक्त वर्षको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को १७ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि कम्पनीले मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएकाले मंसिर १ गतेभन्दाको अघिल्लो अन्तिम कारोबार कात्तिक २७ गते हुने भएकाले आजै शेयर सुरक्षित गर्नुपर्ने भएको हो ।
यसअघि कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको प्रस्तावसहित चैत ७ गतेका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण कम्पनीको सभा स्थगित भएको हो । पछिल्लो सूचनामा उक्त आर्थिक वर्षका शून्य दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पनि कम्पनीले गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित बोनस पश्चात कायम चुक्तापूँजीको आधारमा कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ८६ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि सभाका लागि तय गरेको छ ।
यसअघि कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ४७ प्रतिशत हकप्रद शेयर पश्चात कायम चुक्तापूँजीको आधारमा १ बराबर शून्य दशमलव ९१ को अनुपातमा दोस्रो चरणमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले कात्तिक १४ गतेदेखि ४७ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को लाभांश यो हकप्रद शेयरधनीहरुले भने नपाउने कम्पनीले प्रष्ट पारेको छ । ५ प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीहरुले भने ९ प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १९ करोड ७ लाख रहेको छ । ४७ प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख पुग्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. ५ अर्ब र जारी पूँजी रू. ४ अर्ब रहेको छ ।